Ny Tondro Mo Ibrahim 2016 sy i Madagasikara.
2016-10-09 @ 16:15 in Ankapobeny
Nivoaka tamin'ny 3 oktobra tany Londra renivohitry ny Fanjakana Mitambatra ny tatitry ny Tondro Ibrahim Mo taona 2016 manadihady ny fahaiza-mitantana eto Afrika amin'ny ankapobeny. Voalohany amin'izany i Maorisy manana ny isa 79,9 ary nitombo isa +2,3, faharoa kosa i Botswana manana isa 73,7 (-0,5) ary fahatelo amin'ny isa 73,0 (+1,9) kosa i Cap Vert. Nasongadin'ity tatitra ity fa i Cote d'Ivoire no nahazo isa be indrindra tamin'izany (+13,1), arahin'i Togo (+9,7) sy i Zimbabwe (+9,7), ary i Liberia (+8,7) sy i Rwanda (+8,4).
Araka io tondro navoakan'ny Orina Mpanasoa Ibrahim Mo io dia mitana ny laharana faha-33 mitovy amin'i Togo i Madagasikara amin'ny firenena 54 nampilaharina amin'ny isa 48,5 ary very 7,6 isika amin'izany fampilaharana izany eo amin'ny sehatry ny fitantanam-panjakana ankapobeny eto Afrika hatramin'ny nanombohan'ny fanangonana lahatahiry tamin'ny taona 2006. I Libya no nanary isa be indrindra teo amin'io fitantanam-panjakana io, satria very 18 isa be izao, i Libya izay fantatsika fa nopotehin'ny firenena tandrefana tanteraka, ary lohalaharana amin'izany i Frantsa nentin'i Sarkozy. Firenena faharoa nanary isa be indrindra manaraka azy kosa i Madagasikara amin'ny isa 7,6 be izao, izay firenena "tsy nisy ady" akory.
Afa-baraka tanteraka isika eto Madagasikara!
Filaminana sy Fanjakana Tsara Tantana
Eo amin'ny filaharana ankapobeny dia i Botswana no mitana ny laharana voaohany amin'ny isa 81,9 ary very isa (-1,1) izy amin'izany. Maorisy kosa no mitana ny laharana faharoa amin'ny isa 80,8 (-0,3) ary i Cap Vert no mitana ny laharana fahatelo amin'ny isa 77,1 (-2,3). Araka ny tatitra dia nihemotra avokoa tsy misy anavahana ireo firenena rehetra tratran'ny fihemorana araka ny isa azo eo amin'ny sehatry ny Filaminana sy ny Fanjakana Tsara Tantana.
Cote d'Ivoire (+17,3) manana isa 55,1 sy Liberia (+14,8) manana isa 57,2 ary i Sierra Leone (+9,6) manana isa 59,9 no telo voalohany nahazo isa tsara indrindra tao anatin'ny folo taona. Libya kosa no very isa be indrindra (-34,1) manana isa 16,3 arahin'i Repoblikan'i Afrika Afovoany (-16,2) manana isa 15,7 sy i Burundi (-12,0) manana isa 32,6.
Sokajy Fiarovana ny olon-tsotra
Roa ny refy napetraky ny Afrobarometer momba ity fiarovana ny olon-tsotra ity, eo amin'ny fisian'ny heloka bevava eo an-toerana sy eo amin'ny manodidina. Nahitana fihatsarana izany tamin'ny ankapobeny tao anatin'ny folo taona. Laharana faha-40 no misy an'i Madagasikara (-15,3) manana naoty na isa 37,8/100. Ataoko fa manaiky tsara izany tatitra izany isika na dia tsy haintsika aza ny fomba fandrefesana nataon-dry zareo.
Laharana faha-28 no misy an'i Madagasikara eo amin'ireto sehatra roa ireto, amin'ny isa 55/100 ary very isa 8,3 kosa hatramin'ny nanombohan'ny fanangonana lahatahiry tamin'ny 2006.
Firenena 30 no nahitana fihemorana teo amin'ity sokajy ity ka i Libya (-54,7) no nihemotra indrindra tamin'izany, arahin'i Nigeria (-28,6) sy i Ejipta (-27,2). Firenena 20 kosa no nahitana fihatsarana tamin'izany ka Ongadà (+29,8) sy i Liberia (+29,0) no nihazakazaka indrindra ho amin'izany amin'ny fitomboan'isa ambany kely noho ny +30. Ny fidiran'ny governemanta amin'ny fifanandrinana mitam-piadiana sy ny herisetra ataon'ny mpiantsehatra tsy miankina amin'ny Fanjakana no tena miteraka izany fiharatsian'ny fiarovam-pirenena izany.
Laharana faha-20 amin'ny naoty 86,4 no misy an'i Madagasikara (-9,3) eto amin'ity sehatra ity.
Sokajy Tamberin'andraikitra na Mangarahara (Accountability)
Ny mangarahara ho ahitana ny naoty ambany indrindra ankapobeny (35,5/100) amin'ireto zana-tsokajy tantaraintsika ireto ary nahitana fiharatsiana (-1,0) ihany koa tao anatin'ny folo taona. Ny anton'ny fihemorana amin'ity tamberin'andraikitra ity manerana ny kaontinanta dia vokatry ny fihasimban'ny tondro valo andrefesana azy: Kolikolin'ny Fanjakam-birao (-8,7), Kolikoly ataon'ny manampahefanan'ny Governemanta sy ny mpiasam-panjakana (-2,8), kolikoly any amin'ny sehatry ny famotorana (-1,9), ny tamberin'andraikitra ataon'ny Manampahefana ara-panjakana (-1,1) ary ny fanodikodinana ny Vatsim-Panjakana (-0,3).
Laharana faha-26 i Madagasikara (-8,3) amin'ny isa 36,3/100. Madagasikara (-78,1) ihany koa no nahitana fiharatsiana indrindra eo amin'ny sehatra iadiana amin'ny kolikoly tao anatin'ny folo taona.
Sokajy Fampiharana ny lalàna
Firenena 33 no nahitana fihatsaran'ny fampiharana ny lalàna hatramin'ny taona 2006. Nijotso ny mason-tsivan'ny Fanasaziana (-5,5), ny Famindram-pahefana (-3,7) ary ny Zo hanam-pananana (-2,3) raha nisonga kosa ny Fombam-Pitsarana (+5,3) sy ny fahaleovantena ara-pitsarana (+4,3) tao anatin'ny folo taona. Firenena 34 no nisitraka izany fahaleovantena ara-pitsarana izany ka i Maorisy (94,6), Afrika Atsimo (93,9) ary i Namibia (92,9) no tsara toerana indrindra sady nivoatra indrindra tamin'izany.
Laharana faha-16 (59,4/100) no misy an'i Madagasikara (-0,7) eo amin'io fampiharana ny lalàna io.
Marihin'ny tatitra fa ahitana fifandraisana eo amin'ny Filaminana sy ny fampanjakan-dalàna sy ny fahafahana mirona mankany amin'ny fanorenana toekarena maharitra.
Ny Fandraisana Anjara sy ny Zon'olombelona
Ny 78 isanjaton'ny Afrikana no monina any amin'ny firenena nahitana fihatsarana tao anatin'ny folo taona ny Fandraisana Anjara sy ny Zon'olombelona. Firenena 37 no misitraka izany. I Tonizia (+22,4) no nahitana fihatsarana indrindra mitana amin'izany. Cap Vert (+0,6) no lohalaharana amin'ny naoty 82,0/100 arahin'i Namibia (+0,6) amin'ny isa 76,1/100 sy Maorisy (+0.8) amin'ny naoty 76,0/100. Mitana ny laharana faha-13 kosa i Madagasikara (+0,1) amin'ny isa 64,7/100.
Laharana faha-18 (65,9/100) i Madagasikara (-0,1) eo amin'ny sokajy fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ahitana ny mason-tsivan'ny zo ara-politika, fandraisana anjara ara-politika, fifidianana malalaka sy ara-drariny, ary ny fananan'ny eo amin'ny fitondrana fahefana hitondra.
Laharana faha-21 (52,5/100) kosa i Madagasikara (-10,7) eo amin'ny fampanajana ny zo, fahaefatra niharatsy isa indrindra. Mason-tsivana nahitana fijotsoana ankapobeny eo amin'ny sehatra afrikana ny Fahafahana ara-tsivily (-5,1), ny fahafahana hivory sy hanangana fikambanana (-4,4), ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona (-4,3) ary ny fahafahana hiteny (-2,7).
Nahitana fihatsarana kosa teo amin'ity fampanajana ity zon'olombelona ity na dia mbola ambany aza naotiny azony i Tonizia (+26.3), arahin'i Côte d’Ivoire (+19.3), Zimbabwe (+16.3), Guinea-Bissau (+14.8), Togo (+12.5) ary i Nizera (+10.7).
Laharana fahaefatra (75,7/100) mitovy amin'i Cap-Vert (+2,1) kosa i Madagasikara (+13,9) eo amin'ny miralenta na fampitoviana ny zon'ny lahy sy ny vavy. I Rwanda kosa no sady nahitana fihatsarana indrindra (+24.6) no tsara naoty indrindra (90.3/100) manerana ny kaontinanta. Ny fihatsarana amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny Fitoviana lenta eo amin'ny toeram-piasana (+11.5) sy ny lalàna eo amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy (+9.5).
Fahafaha-manorina Toekarena Maharitra
Nahitana fihatsarana ny Fahafaha-manorina Toekarena Maharitra (+1.8) taona anatin'ny folo taona saingy mbola ambany ihany ny isa ankapobeny eo amin'ny Afrikana 42.9/100. Nihatsara ny fotodrafitrasa (+6.5) sy ny sehatr'asa ambanivohitra (+2.6), raha nijotso kosa ny Tontolon'ny Fihariana (-0.8) sy ny Fitantanam-Panjakana (-1.1). Firenena 38 no nahitana fihatsarana eo amin'ny Fahafaha-manorina Toekarena Maharitra ka i Maraoka (+13.0) no firenena nahitana fivoarana indrindra, arahin'i Nizera (+10.8) sy i Ejipta (+10.7).
Libya (-22.4) kosa no nahitana fiharatsiana indrindra, arahin'i Madagasikara (-9.8) sy i Eritrea (-5.6). Laharana faha-41 isika amin'ny isa 33,1/100. Faha-49 isika (16,6/100) eo amin'ny fananganana sy fikojakojana fotodrafitrasa (-7.1).
Faha-44 i Madagasikara (-8.8) eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana (34.1/100). Na dia mbola mitana ny laharana faha-40 koa aza dia i Madagasikara (-21.7) no niharatsy toerana indrindra teo amin'ny tontolom-pihariana (28,2/100), Madagasikara (11.2/100) kosa no ratsy toerana indrindra teo amin'ny famoronan'asa, arahin'i Zimbabwe (14.6), Tonizia (19.8), Cap Vert (22.6) ary i Sierra Leone (23.0).
Laharana faha-25 (53,6/100) i Madagasikara(-1,3) eo amin'ny sehatra ambanivohitra
Fampivelarana ny maha-olona
Ny fampivelarana ny mahaolona no nahitana naoty tsara indrindra teo amin'ny sehatra Afrikana amin'ny ankapobeny. Firenena 43 no nisy fivoarana tao anatin'ny folo taona ary mahasahana ny 87 isanjaton'ny olompirenena afrikana izany. Voalohany (84,2/100) i Seychelles (+5.2), arahin'i Maorisy (83,7/100) (-0,8) sy i Botswana (78,5/100) (+3,9). I Rwanda kosa no nihatsara fampivelarana mahaolona indrindra (+14.4), arahin'i Ethiopia (+13.9) sy i Angola (+11.2). Madagasikara (41,1/100) faha-50 kosa no faharoa avy any amin'ny farany (-13,5) manaraka an'i Libya (58,1/100) faha-19 eo amin'ny fiharatsian'ny (-15,7) fampivelarana ny mahaolona.
Faha-39 (38,4/100) i Madagasikara (-3,5) eo amin'ny fanabeazana raha nahitana fihatsarana teo amin'io lafiny io ny firenena 41. Faha-51 (49,6/100) i Madagasikara (-20,5) eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ary nahitana ny fiharatsiana indrindra tamin'izany. Faha-45 (35,3/100) i Madagasikara (-16,5) eo amin'ny fanasoavana (Welfare/Bien être) ary mbola mitana ny telo farany amin'ny fiharatsian'io tontolo io.
Toy izay sy toy izay amin'ny ankapobeny ny tatitra (108 pejy) navoakan'ny Orina Mpanasoa Mo Ibrahim taona 2016 ka miresaka an'i Madagasikara.
Ato ny loharanom-baovao nakana ireo voalaza ireo.